လျှပ်စစ်ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲယောဘကိုဖျေါပွခကျြ Template ကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် / လျှပ်စစ်ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲယောဘကိုဖျေါပွခကျြ Template ကို
လျှပ်စစ်ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲယောဘကိုဖျေါပွခကျြ Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 18, 2016 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် Leave 409 views
လူမှုရေးကြောင်းအလုပ်အတွက်မီးရထားသင်ခန်းစာများ. ယေဘုယျအားဖြင့်ညွှန်ကြားချက်များတွင်အလုပ်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်လေ့လာမှုနှင့်နည်းပြတစ်ဦးရောနှော execute သူတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်း.
သေနတ်မောင်းခလုတ်, လွယ်ကူချောမွေ့, နှင့်ကျိုးနွံလူတန်းစားစကားစမြည်.
အကဲဖြတ်ရန်နှင့်လူတန်းစား studentsI လူတန်းစား operate, တာဝန်ကျ, နှင့်စာတမ်းများ.
Make နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်မိသားစုအပြုအမူအပါအဝင်ကိစ္စရပ်များတွင်ကျောင်းသားများကို undergraduate သို့မဟုတ်ဘွဲ့ရဖို့ပြောတတ်, လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ကျန်းမာရေး, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း input ကိုအကဲဖြတ်ရန်.
ရွယ်တူချင်းအတူ chatting အားဖြင့်ဧရိယာအတွင်းတိုးတက်မှု၏ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါ, မကြာသေးမီဝတ္ထုဆန်းစစ်, နှင့်အထူးကုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာပါဝင်.
အချက်အလက်များ၏အထူးသဖြင့်ဧရိယာ၌ Carryout စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ဖတ်စာအုပ်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဝေရန်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာပမြေား, သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး.
ဥပမာအား syllabi များအတွက်လူတန်းစားအရင်းအမြစ်များကို Make, ပြင်ဆင်မှုကလက်ကမ်းစာစောင်များ, နှင့်တာဝန်များ.
အလုပ်သင်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ, ဘွဲ့ရသို့မဟုတ်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းပေးခြင်း, နှင့်သုတေသနအလုပ်.
ပြင်ဆင်ထား, တန်ဖိုး, နှင့်အစီအစဉ်ကိုအကြောင်းအရာ modify, သင်ရိုးညွှန်းတမ်း, သင်တန်းထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, နှင့်သင်ကြားရေးအမျိုးအစားများ.
စုရုံး, ပေး, နှင့်တန်းစာမေးပွဲ, သို့မဟုတ်ဤအလုပ် assign.
ကျောင်းသားအလုပ်မှတ်တမ်းများကိုထိန်းသိမ်း, သည်အခြားလိုအပ်သောမှတ်တမ်းများ, အမှတ်အသားများနှင့်အတူ.
ဌာနကိစ္စရပ်များဂရုစိုက်ကြောင်းကျောင်းသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီများအပေါ် Assist, အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, နှင့်ပညာရေးပြဿနာများ.
ကျောင်းသားငှားရမ်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်, မှတ်ပုံတင်, နှင့်တည်နေရာလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအားဖြင့်ဌာနခွဲဦးခေါင်းအဖြစ်ပေးဘို့အဖြစ် admin ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလုပ်ဆောင်သွားရန်.
အလုပ်-related စာရွက်စာတမ်းများအတွက်နားလညျမှု-နားလည်ခြင်းအပိုဒ်နှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားစာကြောင်း Reading.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားလူများပြည့်စုံအာရုံကိုပေးအခိုင်အမာအဘယျသို့,, သငျသညျကိုဖန်ဆင်းခံရသည့်အမှုအရာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အတှကျအခြိနျသုံးပြီး, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းမေးခွန်းများကို, နှင့်မသင့်လျော်ဖြစ်ကြောင်းအချိန်လေးမှာ mesmerizing ဘယ်တော့မှ.
critical အတွေးအခေါ်-အသုံးပြုခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အားနည်းချက်များကိုနှင့်နည်းလမ်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ထင်, ရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်ဒုက္ခမှအခြားအဖြေကို.
Active ကိုသင်ယူ-နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်အလားအလာများနှင့်မကြာသေးမီ problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအလတ်ဆတ်တဲ့အချက်အလက်များ၏သက်ရောက်မှုများ.
လတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စများသင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ပညာပေးသည့်အခါမဟာဗျူဟာ-လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ကောက်နေ educationORinstructional မဟာဗျူဟာများနှင့်တိကျသောအခွအေနေအဘို့သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများကိုလေ့လာခြင်း.
မိမိကိုယ်ကို၏ခြေရာကောက်-OverseeingANDExamining ထိရောက်မှု, အခြားလူများ, သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မှုများထုတ်လုပ်ရန်.
သူတို့ကျင့်သောကြောင့်သူတို့တုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးအမြင်-သိ othersA တုံ့ပြန်မှုများနှင့် comprehension.
အခြားသူများစပ်လျဉ်း control-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ’ လုပ်ရပ်များ.
သူတို့ရဲ့ဉာဏ်သို့မဟုတ်အလေ့အထပြောင်းလဲပစ်ရန် Marketing ကို-ထိရောက်သောအခြားသူတွေ.
အရှေ့တိုင်းဆန်-positive တစ်ဦးချင်းစီကို enable မဟာဗျူဟာရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများ.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာအဆင့်မြင့်ကိုဒုက္ခခွဲခြား-ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်မှုဆော related ကြောင်းဒေတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်.
လူတစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းဖို့နည်းပညာဒီဇိုင်း-နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ align လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များကို.
Tools များရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း execute မှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများ၏ကြင်နာ.
အရစ်ကျ-ထည့်သွင်းခြင်းအစီအစဉ်များ, ထုတ်ကုန်, ဝါယာကြိုးများ, သတ်မှတ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် tools များ.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်-ကိုကြည့်ရှုခြင်း dial gauge, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အရိပ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေဟာစက်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်စေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခါဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင်းကို Maintenance-ဖျော်ဖြေ upkeep.
မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု. Mende-Restoring devices များသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ပွုလုပျခွငျးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုန်စည်စမ်းသပ်ခြင်း, ကုမ္ပဏီများမှ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို.
systems အစီအစဉ်မျိုးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သောအရာကိုသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပဲဘယ်လိုအပြောင်းအလဲများ, ဝေဒနာတွေက, အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုထိခိုကျနိုငျ.
အဆိုပါကိုယ်ပိုင်အချိန် Timemanagement-ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်လည်းအခြားသူများကို’ တဦးတည်း၏အခါသမယ.
ပစ္စည်းနည်းလမ်-တှေ့ကွုံနနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စံပြအသုံးချဆီသို့ဦးတည်လေ့လာဆည်းပူးခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ဂီယာ, နှင့်သတ်မှတ်ထားသောဘူးမှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ထုတ်ကုန်လည်ပတ်.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-အဆောက်အအုံ၏စစ်ဆင်ရေး, တွန်းအားပေး, သူတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖြစ်ရှေးရှေး directing, အလုပ်အဘို့အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးအဖြတ်.
အောင်မြင်ခြင်း / လုပ်ငန်း – 94.80%
တည်မြဲခြင်း – 93.13%
စီမံကိန်း – 96.20%
စီမံခန့်ခွဲမှု – 90.47%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 89.85%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 88.16%
လူမှု Alignment – 85.12%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 89.73%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 96.39%
မှီခို – 93.37%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 92.47%
သမာဓိရှိခွငျး – 92.59%
လွတ်လပ်ရေး – 89.18%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 89.68%
analytical အတွေးအခေါ် – 92.40%